Sweden oo magaceeda Norway ugu soo iibin doonto cirbada Corona-virus. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Sweden oo magaceeda Norway ugu soo iibin doonto cirbada Corona-virus.
Coronavirus Foto: T.O.I
Midowga Yurub ayaa isbuucyo kahor heshiis la galay shirkada daawooyinka ee AstraZeneca oo kamid ah shirkadaha gacanta ku haya soo saarista cirbada daawada Corona-virus. Si muwaadiniinta dalalka kunool EU-da ay u helaan cirbada daaweynta xanuunka Covid-19.
EU-da ayaa sidoo kale wada-hadal kula jiro ilaa sadex shirkadood oo kale oo ka shaqeynayo soo saarista cirbada Corona-virus, si muwaadiniinta dalalka midowga Yurub ay xaq ugu helaan helista daawada xanuunkaas.
Dhibaato: Norway EU kuma jirto… Xalka: Sweden.
Dowlada dalkan Norway ayaa dagaal adag u gashay si ay heshiiska EU-da ay qeyb uga noqoto, si muwaadiniinta Norwiijiga ay u helaan cirbada Corona-virus, balse arintaas ayaa markii danbe suurtogal noqon weyday.
Balse dalka Sweden oo kamid ah dalalka EU-da ayaa Norway ka ogolaaday inay magacooda kusoo iibin doonaan cirbado dheeri ah oo ka badan inta ay Sweden u baahnaan karto, si ay uga sii iibiyaan dalalka Norway iyo Iceland.
Wasiirka caafimaadka Norway, Bent Hiøe ayaa u mahadceliyay midowga Yurub iyo Sweden-ba, wuxuuna sheegay in Norway ay caafimaad ahaan iyo wada-shaqeyn ahaanba ku xiranyihiin saaxiibada ay ku dhex leeyihiin midowga Yurub.
Xigasho/kilde: Svenskene skal sikre Norge korona-vaksiner.
Previous articleOslo: Abeeso(Jabiso) guri ugu soo gashay qoys oo booliska loogu yeeray.
Next articleHøyre: argagaxisada halagu xukumo 50 sano oo xabsi ah!.